Nahazoana Namana ny ‘Harena Tsy Marina’ (Lioka 16) | Fiainan’i Jesosy
Miezaha ho Malina ka Tsinjovy ny Hoavy
FANOHARANA MOMBA AN’ILAY MPANOMPO TSY MARINA
AMPIASAO MBA “HAHAZOANA NAMANA” NY HARENANAO
Nisy mpamory hetra sy mpanora-dalàna ary Fariseo nihaino an’i Jesosy, rehefa nilaza an’ilay fanoharana momba ny zanaka very izy. Tokony ho azon’izy ireo tsara fa mamela ny helok’ireo mpanota mibebaka Andriamanitra. (Lioka 15:1-7, 11) Niresaka tamin’ny mpianany i Jesosy izao, ary nilaza fanoharana momba ny lehilahy manankarena iray. Fantatr’izy io fa tsy nanao ny marina ny mpanompo iray miandraikitra ny ao an-tranony.
Nampangaina ho nandanilany foana ny fananan’ny tompony ilay mpanompo, ka nilaza ny tompony fa horoahina izy. Nieritreritra àry izy hoe: “Inona re no hataoko e? Hesorin’ny tompoko amiko mantsy ny fiandraiketana ny fananany. Ny mitana angady tsy vitan’ny heriko, ny mangataka mahamenatra ahy.” Hoy àry izy: “Hitako ny hataoko mba hisy olona handray ahy ho ao an-tranony, rehefa voaroaka aho.” Nantsoiny avy hatrany ireo nananan’ny tompony trosa, ka hoy izy: “Toy inona no ananan’ny tompoko aminao?”—Lioka 16:3-5.
Hoy ilay voalohany: “Menaka oliva injaton’ny bata.” Tokotokony ho 2 200 litatra izany. Nanana sahan’oliva midadasika angamba ilay mpitrosa, na mpivarotra menaka oliva. Hoy ilay mpanompo taminy: “Alaivo ilay taratasy fifanekena any aminao ary mipetraha ka soraty haingana hoe dimampolo [1 100 litatra].”—Lioka 16:6.
Nanontany mpitrosa iray koa ilay mpanompo hoe: “Ary ianao, inona no ananany aminao?” Hoy izy io: “Varimbazaha injaton’ny kora.” Tokotokony ho 22 000 litatra izany. Hoy indray ilay mpanompo: “Alaivo ilay taratasy fifanekena any aminao, ka soraty hoe valopolo.” Nesoriny ny 20 isan-jaton’ilay trosa.—Lioka 16:7.
Mbola nitantana ny fananan’ny tompony ilay mpanompo, ka afaka nampihena ny trosa tokony haloa amin’ny tompony. Nahenany àry ilay trosa, ka nana-namana ho afaka hiantra azy izy rehefa very asa.
Fantatr’ilay tompo izay nitranga, tatỳ aoriana. Matiantoka izy nefa nampiaiky azy ny nataon’ilay mpanompo. Noderainy izy io satria ‘malina na dia tsy marina aza.’ Hoy i Jesosy: “Hita fa malina kokoa noho ny zanaky ny mazava ny zanak’ity tontolo ity, rehefa mifampiraharaha amin’ny mpiara-belona aminy.”—Lioka 16:8.
Tsy nanala tsiny ny zavatra tsy nety nataon’ilay mpanompo i Jesosy sady tsy nampirisika ny olona ho fetsifetsy rehefa manao raharaham-barotra. Inona àry no tiany holazaina? Nampirisika ny mpianany izy hoe: “Ataovy izay hahazoana namana amin’ny alalan’ny harena tsy marina, mba horaisin’izany namana izany any amin’ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany harena izany.” (Lioka 16:9) Nampianariny hitsinjo ny hoavy sy ho malina ny mpianany. Mila mitsinjo ny hoaviny mandrakizay ny mpanompon’Andriamanitra, izay toy “ny zanaky ny mazava”, ka hampiasa tsara ny harenany.
I Jehovah sy ny Zanany ihany no afaka mandray olona ao amin’ny Fanjakana any an-danitra sy ao amin’ny Paradisa an-tany eo ambany fitondran’ilay Fanjakana. Tokony hiezaka mafy ho naman’izy ireo isika, ka hampiasa ny fananantsika mba hanohanana ny asan’ilay Fanjakana. Ho azo antoka amin’izay ny hoavintsika mandrakizay, rehefa tsy hilaina intsony ny volamena sy volafotsy ary ny harena.
Nilaza koa i Jesosy fa izay mendri-pitokisana ka mampiasa tsara ny harenany na ny fananany, dia ho mendri-pitokisana koa rehefa hanankinana zava-dehibe kokoa. Hoy izy: “Koa raha tsy asehonareo fa mendri-pitokisana ianareo amin’ny harena tsy marina, iza no hanankina aminareo ny tena harena [toy ny asan’ilay Fanjakana]?”—Lioka 16:11.
Nasehon’i Jesosy tamin’izany fa betsaka no hantenaina amin’ny mpianany, raha tian’izy ireo ny horaisina “any amin’ny fonenana mandrakizay.” Tsy misy tena afaka ny ho mpanompon’Andriamanitra sady ho mpanompon’ny harena tsy marina, na ny fananana. Toy izao no namaranan’i Jesosy ny teniny: “Tsy misy mpiasa an-trano mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho halany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray hifikirany ary ny anankiray hohamavoiny. Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy ny Harena ianareo.”—Lioka 16:9, 13.
Inona no nataon’ilay mpanompo tao amin’ilay fanoharana, mba hahazoana namana hanampy azy any aoriana?
Inona ilay “harena tsy marina”, ary ahoana no azon’ny Kristianina ampiasana azy ireny mba “hahazoana namana”?
Iza no afaka mandray antsika “any amin’ny fonenana mandrakizay”, raha mendri-pitokisana isika rehefa mampiasa ny “harena tsy marina”?
Hizara Hizara Miezaha ho Malina ka Tsinjovy ny Hoavy